Ezi zezona ziwotshi zibalaseleyo zeGPS ezinesimo sokubeka esweni | Iindaba zeGajethi
Okwethutyana ngoku, kuya kusiba yinto eqhelekileyo ukubona indlela iimbaleki kunye nabalandeli bezemidlalo abazisebenzisa ngayo izixhobo zokulinganisa ukuba babe nolwazi malunga nomsebenzi wabo wasemzimbeni ngawo onke amaxesha. Kukho inani elikhulu lezixhobo zolu hlobo kwimarike, kodwa ayizizo zonke Banikezela nge-chip ye-GPS kunye nokubeka esweni ukubetha kwentliziyo, imisebenzi ebalulekileyo kubasebenzisi abaninzi.
Kule nqaku sikubonisa iiwotshi / ii-quantifiers ezilungileyo nge-GPS chip kunye nokubeka esweni ukubetha kwentliziyo, ukuze ngalo lonke ixesha sigqiba ukwenza umthambo sinalo lonke ulwazi malunga nomsebenzi wethu womzimba kwi-smartphone yethu. Kuxhomekeke kwimali oceba ukuyisebenzisa, ndiye ndazibeka kwiimodeli onazo: isiphelo esiphezulu, phakathi kwinqanaba kunye noqoqosho.
1 Iwotshi eziphezulu zeGPS
1.1 IGarmin Forerunner 920XT
1.2 I-Fitbit Ionic
1.4 I-Suunto Ambit 3 HR
1.5 Uthotho lweApple 3 Nike +
2 Uluhlu oluphakathi lwe-GPS
2.1 I-Samsung Gear Fit 2 Pro
2.4 UGarmin Vivoactive HR
2.5 I-Polar M600
3 Ixabiso eliphantsi leewotshi zeGPS
3.1 I-TomTom Runner 3
3.2 TomTom Imbaleki Cardio
3.3 TomTom Imbaleki 3 Cardio + Umculo
Iwotshi eziphezulu zeGPS
IGarmin Forerunner 920XT
Exhotyiswe ngesisombululo esiphakamileyo esingachukumisi umbala wescreen kunye neebhande ezibhetyebhetye ezichaziweyo, iForeruner 920 XT ifaka inani elikhulu lemisebenzi yoqeqesho ephezulu kunangaphambili kwaye ilula nge-15% kwaye sinokuphatha i-wetsuit. Esi sixhobo silungele abo baqeqesha emanzini avulekileyo nakumachibi okudada njengoko sisivumela ukuba sifumane Ulwazi oluneenkcukacha malunga nomgama, ukubetha kwentliziyo, ukubala kokubetha, isantya sokubetha, kunye nenqaku le-SWOLF.
Ukuba siyaphuma emanzini, esi sixhobo sikwalungele naluphi na uhlobo lomsebenzi wangaphandle, ngakumbi ukuhamba ngebhayisikile, enkosi kwiimvakalelo ezahlukeneyo ezakhelwe kule modeli. Kodwa ukubaleka okanye i-triathlon yinto yakho, iGarmin Forerunner 920XT isivumela ukuba sibhale phantsi izinto ezintandathu zomdyarho ezinje nge-cadence, ubude bomgama, ixesha lokunxibelelana nomhlaba, ixesha lokunxibelelana nomhlaba, ukuma nkqo kunye nokuma nkqo. Enkosi kwi-GPS chip isivumela ukurekhoda ngalo lonke ixesha indlela esithatha xa sihamba ukwenza umthambo okanye ukuqeqesha.
Enkosi kuGarmin Qhagamshela singagcina, sicwangcise kwaye sabelane ngemizamo yethu ukuzithelekisa nezo zabahlobo bethu okanye ukufumana igrafu yendaleko yethu. Enkosi kwisicelo seGarmin Qhagamshela esiselfowuni, sinokulufumana lonke ulwazi esiludingayo kwiiseshoni zethu zoqeqesho ngqo kwisixhobo esiphathwayo. U-E Garmin Forerunner 920XT uyafumaneka ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka nomnyama, omhlophe nobomvu, kunye nomnyama nesilivere.
I-Forerunner 920XT ilungele ukudada, ukubaleka, ukuhamba ngebhayisikile okanye ukudityaniswa kwazo zonke: itrayethloni.
Enkosi nge-chip yayo ye-GPS kunye ne-sensor yenqanaba lokubetha kwentliziyo, abafana baseFitbit babeka kuthi i-smartwatch ngemisebenzi ebonelelwa zezona zinto zaziwa kakhulu kwinkampani. Ngaphakathi kuyo sinokugcina ukuya kuthi ga kwiingoma ezingama-300 ukuze inkuthazo yethu ingawi nangaliphi na ixesha xa sisenza konke okusemandleni ethu.
Umqeqeshi womntu odibeneyo, isinika iingcebiso kwiscreen sentshukumo nganye esiyenzayo, ukongeza ekusivumeleni ukuba siqwalasele iindlela zethu ezihambelana nenkqubela yethu. Ngombulelo kwi-altimeter siya kuba nakho ukwazi ngalo lonke ixesha ukungalingani kwendlela yethu kunye nezinye iinkcukacha ezinje ngomgama ohanjiweyo, indlela ehanjwayo, iipulsation ...
I-Forerunner 630 yenzelwe iimbaleki. Inesisombululo esiphakamileyo sokuchukumisa isikrini apho lonke ulwazi olufowunelwa sisixhobo ngelixa sibalekayo luboniswa, njengokulinganisa kwentliziyo, ukusetyenziswa kweoksijini, ixesha lokunxibelelana nomhlaba, ubude bomgama, ubudlelwane ngokuthe nkqo kunye nombulelo kwi-GPS chip indlela esiyithathayo.
Inenkqubo yesaziso evakalayo iya kusinceda ekukhuthazeni esinokuyifuna ngalo lonke ixesha, izaziso ezikrelekrele kunye nenketho yokwabelana ngalo lonke ulwazi olufakwe kwizicelo ezikhoyo ze-iOS kunye ne-Android ecosystems.
I-Suunto Ambit 3 HR
USuunto, usinika imodeli ye-AMBIT3 Ukungena kwamanzi ukuya kwiimitha ezili-100, i-GPS edibeneyo kunye nenzwa yesantya senhliziyo. Le modeli liqabane elifanelekileyo kwiimidlalo ezili-10 zabona basebenzisi, nokubaleka, ukuhamba ngebhayisikile, ukuqubha ... Ukongeza kwi-GPS edityanisiweyo, ikwadibanisa i-altimeter ye-barometric ukucwangcisa iindlela zethu ngeemephu zomhlaba. Enkosi kwisicelo seSuunto Movescount sinokuba nalo lonke ulwazi oluqokelelwa sisixhobo sethu kwi-smartphone yethu.
ISuunto, AMBIT3 PEAK HR
Uthotho lweApple 3 Nike +
I-Apple Watch Series 3 sisizukulwana sesithathu se-smartwatch sika-Apple, i-smartwatch esiba sisizukulwana sesithathu sale modeli kwaye ikwafumaneka ngonxibelelwano lwe-LTE, esivumela ukuba senze umnxeba ngaphandle kokuba ne-iPhone isondele. Lo mzekelo Kuyamelana namanzi iimitha ezingama-50, ine-altimeter kunye ne-GPS edibeneyo. Ngokuphathelele kwimisebenzi yokulinganisa umsebenzi wethu, iApple isinika iinkqubo ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwimithambo esiza kuyenza: ukuhamba, ukubaleka, ukukhwela ibhayisikile, ukuhamba ngebhayisikile okumileyo, ukuqhuba kwitreadmill ... ukuziqhelanisa nazo zonke iimfuno zabasebenzisi.
I-Apple Watch, kuzo zonke iinguqulelo zayo, isivumela ukuba siyenze ibe yeyakho ngenani elikhulu lemitya, ulusu, isinyithi, ezemidlalo, nenayiloni ... Esi sixhobo iyahambelana kuphela ne-iPhone, Ke ukuba unayo i-iPhone kwaye ufuna iwatchwatch esebenza kuzo zombini ezemidlalo kunye nezaziso, esi sisixhobo osifunayo. I-Apple Watch Series 3 iyafumaneka kwiinguqulelo ezingama-38 kunye nama-42-millimeter, ukuqala nge- € 369.
Thenga ii-Apple Watch Series 3
Isizukulwana sesithathu se-Samsung Gear S3 siqinisekise kuphela ukuba ukuzibophelela kwe-Samsung kwiTizen njengenkqubo yokusebenza yeyona ndlela ilungileyo, ishiya bucala i-Android Wear engalunganga. Lo mzekelo, njenge-Apple Watch Series 3, unayo I-GPS edityanisiweyo kunye ne-altimeter, inokhuseleko lwe-IP68 nangona ingacetyiswanga ngokudada okanye ukuntywila. I-Gear S3 iyafumaneka kuhlobo lwezemidlalo olulungele ukuyisebenzisa yonke imihla ukulinganisa umthambo wethu okanye umlinganiso womsebenzi wethu wemihla ngemihla. Ikwafumaneka kuhlobo lwe-LTE esivumela phuma uye kwenza imidlalo ngaphandle kokuxhomekeka kwi-smartphone yethu nangaliphi na ixesha.
Ngokungafaniyo neApple Watch, I-Samsung Gear S3 iyahambelana zombini kunye nezixhobo ezisekwe kwi-Android Ndiyabulela kwisicelo esifumanekayo kuzo zombini i-ecosystems, kodwa ukufumana okuninzi kuyo, kungcono ukuyisebenzisa ngefowuni ye-Samsung Galaxy. Le modeli ifumaneka nge-319 euro kwinguqu yayo ngaphandle koqhagamshelo lwe-LTE.
Uluhlu oluphakathi lwe-GPS
I-Samsung Gear Fit 2 Pro
Inkampani yaseKorea iSamsung ikwabonelela ngemodeli engabizi kakhulu yokulinganisa umthambo esiwenza yonke imihla, ngaphandle kwezinto ezininzi ezinokukhethwa yiGear S3. IGear Fit 2 Pro inesakhelo esakhelweyo sokubekwa kwentliziyo kunye neGPS, ayinamanzi ukuya kuthi ga kwi-50 yeemitha, inomatshini wokuzenzekelayo kwaye, njengeGear S3, ilawulwa yiTizen, inkqubo yokusebenza kweselfowuni yakwaSamsung.
Esi sixhobo iyahambelana zombini i-Android kunye ne-iPhone, Kodwa ukuba ufuna ukufumana okungcono kuyo, njengeGear S3 kuyacetyiswa ukuba ube nesiphelo sendlela seSamsung. Zininzi iimodeli zeGear Fit kwintengiso, kodwa inye kuphela ene-chip ye-GPS yile modeli inexabiso elimalunga nee-euro ezingama-229.
Njengo-Forerunner 630, le modeli yeGarmin ijolise nakwiimbaleki ngokunjalo. Enkosi kwisivamisi sayo sombane, iyaqhubeka ngokulinganisa ukubetha kwentliziyo yethu kunye nokubetha ngomzuzu ngexesha langempela. Ukongeza, kunye nesantya esihlanganisiweyo, siyakwazi Linganisa umgama kunye nesantya xa usebenza kwitrekhi yangaphakathi okanye kwitreadmill.
Ine-chip ye-GPS yokulandela iindlela kunye nokuhlala ngaphezulu, ikwasivumela ukuba sizikhumbuze ukuba kufuneka sihambe okungenani imizuzu embalwa ngeyure nganye. I-Forerunner 235 iyasivumela yenza ngokwezifiso isixhobo sakho ngamacandelo ahlukeneyo ukwenza izixhobo zibe zezakho kunye nokuvumela ukuba ungeze nawuphina umfanekiso kwi-smartphone yakho.
Le modeli yahlukile kwi-Forerunner 235 kuloo nto akukho liliso lokubetha kwentliziyo, kuba yonke imisebenzi kunye neempawu ziyafumaneka kuzo zombini iimodeli, kubandakanya inkqubo yokwazisa ye-smartphone yethu.
UGarmin Vivoactive HR
I-Garmin Vivoactive HR isinika uyilo olwahluke ngokupheleleyo kunemodeli ze-Forerunner, kwaye ngokungafaniyo noluhlu, iVivoactive HR isivumela ukurekhoda imisebenzi yethu yomzimba yokuqubha, ukubheqa isikhephe, ukuskiya, ukubaleka okanye ukukhwela ibhayisekile. Inenzwa yokubetha kwentliziyo, i-GPS chip yokulandela umkhondo wendlela yethu kunye nescreen sokuchukumisa esinokuthi sinxibelelane nesaziso esisifumana kwi-smartphone yethu.
UGarmin Vívoactive HR
I-Polar M600 sisixhobo esifanelekileyo sokulinganisa naluphi na uhlobo lomsebenzi, nokuba kukwitraki okanye emanzini, ukongeza ukurekhoda imisebenzi yethu yemihla ngemihla kunye nokugcina irekhodi elipheleleyo lemijikelezo yethu yokulala. Inefayile ye- isikrini sokuchukumisa, i-GPS edityanisiweyo kunye ne-4 GB yokugcina ukugcina umculo esiwuthandayo kunye nokumamela ngee-headphones zebluetooth ngelixa sizilolonga.
Inayo inzwa yokubetha kwentliziyo kwaye Inikwe amandla yi-Android Wear 2.0, ke sinako ukufaka inani elikhulu lezicelo kwaye sisebenzise izibonelelo esizifumana kuGoogle Fit.
Eyona modeli yezoqoqosho yeFitibt nge I-GPS edityanisiweyo yiFitbit BlazeImodeli enesivamvo sokubetha kwentliziyo, izaziso ezivela kwi-smartphone yethu, imitha yamandla ethu e-aerobic, iiseshoni zokuphefumla ezikhokelwayo, isikrini sokuchukumisa, imemori yangaphakathi yokugcina umculo wethu owuthandayo, imitya eguqukayo, ukubeka esweni okuqhubekayo kwemisebenzi yemihla ngemihla kunye iphupha ...
Ixabiso eliphantsi leewotshi zeGPS
Ngaphakathi kuluhlu lweewotshi zexabiso eliphantsi zeGPS, uTomTom ngumphathi kwaye usinika iimodeli ezimbini ezahlukeneyo ngokuxhomekeke ekubekweni kweliso kwimisebenzi yemihla ngemihla esifuna ukuyenza. Iimodeli zeSpark zijolise kubo bonke abasebenzisi abafuna ukwazi ngawo onke amaxesha amanyathelo athathiweyo imini yonke, imizuzu yomsebenzi, iikhalori ezitshisiweyo, umsebenzi wokulala ... Imodeli yembaleki, njengoko igama lichaza kakuhle, Ijolise kwiimbaleki kunye nabasebenzisi abenza imisebenzi yezemidlalo ngaphakathi okanye ngaphandle. Ngaphakathi kuzo zombini iimodeli sifumana izixhobo ezifanayo kunye nesoftware.
I-TomTom Runner 3
Ngaphantsi nje kwe-euro ezingama-100, singayonwabela iTomTom Runner Cardio, isixhobo Amanzi kunye ne-GPS chip. Ukuba sifuna amanqaku amaninzi, kufuneka sikhethe iimodeli zeCardio okanye zeCardio Music. Ungajonga isifundo sethu kwi uyihlaziya njani iTomTom simahla.
TomTom Imbaleki Cardio
Le modeli idibanisa isivamvo senqanaba lentliziyo ukongeza kuzo zonke izibonelelo osinike zona kwimodeli yangaphambili.
UTom Tom Imbaleki 3 Cardio
TomTom Imbaleki 3 Cardio + Umculo
I-TomTom Runner 3 Cardio + Music isinika imisebenzi yemodeli yeCardio kodwa nge ukugcinwa kwangaphakathi ukuze sikwazi ukugcina umculo esiwuthandayo ngelixa sisenza imidlalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ukubukela kweGPS ngabavavanyi bezinga lentliziyo